बिएन्डसी टिचिङ अस्पताल – Health Post Nepal
डा. केसीको चेतावनी : आयोगको विपरीत बिएन्डसीलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया बढाइए सत्याग्रह सुरू
चिकित्सा क्षेत्रका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको अडान विपरीत बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया विचाराधीन छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन अघि बढाउन...
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आज अपरान्ह ५:३० बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्। सम्भवत: डा. केसीले सरकारले सम्बन्ध निर्णय गरे तत्काल अनसन बस्ने घोषणा गर्ने उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्। झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई अवैध सम्बन्धन दिन...
दुर्गा प्रसाईं मेडिकल व्यवसाय क्षेत्रको एक विवादित नाम हो। विवाद र आलोचना जति नै भए पनि उनी आफ्नो शैलीमा उत्तिकै चलायमान छन्। र, आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उनको चरित्रलाई सदर गरिदिए–दुर्गा प्रसाईको ब्राण्ड नै आलोचना हो भनेर।...